10 Yakawanda Kazhinji Maritime Mutemo Mistake muUAE | Mutemo Makambani Dubai
10 Yakawanda Kazhinji Maritime Mutemo Mistake muUAE
Iwe Unoda Rini Gweta reMaritime?
Maritime Cargo Inodaidzira MuUAE
Iyo UAE maritime bhizinesi chikamu chikamu chenzvimbo dzakabvumidza kusiyaniswa kwehupfumi. Izvi, zvakare, zvakatungamira mukukura kwehupfumi kweAFA. Saka nekudaro, bhizinesi reUAE yegungwa rakakurumidza kuve indasitiri yakakura nekufamba kwenguva.
IUAE ine zviyero gumi nezviviri parutivi penzvimbo dzemafuta. Uye sekureva kweWorld Shipping Council, maviri emachiteshi eUAE ari pakati pe epamusoro makumi mashanu emidziyo yezviteshi, neDubai mune yepamusoro gumi.
Uyezve, 61% yemitoro inoenda kuGulf Cooperation Council inosvika pakutanga pachiteshi chengarava cheUAE. Izvi zvinoenderera mberi kuratidza kuti chikamu chebhizimusi chengarava chiri kubudirira sei muUAE.
Iyo indasitiri iri kukura yechiteshi ingangotungamira mukukwira kwenyaya dzemutemo dzine chekuita nazvo. Nyaya dzemutemo senge tsaona dzemumakungwa, zvirevo zvegungwa, kurasikirwa nhumbi kunogona kuitika. Uye kune ese aya nyaya dzepamutemo, mitemo yakasiyana inoshanda senongedzo mukuigadzirisa. Iyi mitemo inozivikanwa semitemo yegungwa.
Ngatitangei tanyura mune iwo mutemo wemumakungwa uri pamusoro pei tisati tarisa zvikanganiso zvakajairika maererano nemitemo yegungwa.
Chii chinonzi Maritime Mutemo?
Mutemo wemakungwa, unonziwo mutemo wevamiriri, ibumbiro remitemo, zvibvumirano, nemisangano inotonga nyaya dzezvakazvimirira dzegungwa uye rimwe bhizinesi rezvikepe sekutakura kana kukanganisa kunoitika pamvura yakashama.
Munzvimbo yepasi rose, International Maritime Organisation (IMO) yakatemera mitemo yakati wandei inogona kuchengetedzwa nevachengeti vemumahombekombe nemagungwa enyika dzakasiyana Nyika dzakasaina chibvumirano neIMO dzinogona kutora iyi mirawo mumitemo yavo yekuyemura.
Kazhinji, mitemo yegungwa inoteedzerwa mushure memitemo yeIMO inotonga zvinotevera:
Inishuwarenzi inotaura zvine chekuita nezvikepe uye zvinhu
Nyaya dzevagari vemo dzinosanganisira varidzi vezvikepe, vafambi, uye vafambisi vengarava
Kunyoresa uye rezinesi
Maitiro ekuongorora zvikepe
Kufambisa kwezvinhu uye vafambi
Rimwe remabasa ekutanga eIMO ndeyekuona kuti magungano epasirese epagungwa aripo iye zvino. Ivo zvakare vanoiita iyo poindi yebasa kuvandudza zvibvumirano zvitsva nedzimwe nyika panenge paine kudikanwa.
Kubva nhasi, kokorodzano dzakawanda dziri kutonga dzakasiyana dzakasiyana dzekutengeserana kwegungwa uye kutakura. Pakati pekokorodzano idzi, IMO yakadoma matatu semagungano avo epakati. Iyi kokorodzano ndeiyi:
Gungano remarudzi akawanda rinochengetedza hupenyu panguva yegungwa
Kokorodzano inorambidza kusvibiswa kubva mungarava
Kokorodzano inobata nezve chikamu chekudzidziswa, kupihwa chitupa, uye kuchengetwa kwemawatch
Hurumende dzenhengo dzesangano iri vane basa rekumisikidza bumbiro rakatemwa neIMO munyika dzawo. Hurumende idzi dzinoenderera nekumisikidza zvirango zvekutyora magungano.
Iyo UAE mitemo inotora akawanda maficha eazvino epasi rese maritime kokorodzano. Iyi mitemo yegungwa inoshanda kune ese maEmirates muUAE.
IUAE ine mutemo wakakwenenzverwa wemugungwa, nemitemo yakati wandei iriko, iyo yakatosiyana nedunhu rese. Zvisinei, kune dzimwe nzvimbo dzisinganzwisisiki mumunda, izvo zvinogona kutungamirira kune dzimwe nharo, uye zvikanganiso muzvibvumirano zvegungwa. Mutemo weUAE wegungwa unowira pasi pemutemo weUAE Federal wakanyorwa munaNo. 26 wa1981.Chikamu chemutemo uyu chinotsanangura mutemo unotungamira zviitiko zvekutakura muAFA. Mutemo uyu wakagadziridzwa mugore ra1988 kufukidza huwandu hwakawanda hwenyaya dzemisoro.
UAE Maritime Mhosva
Pamitemo yeUAE yegungwa, zvirevo zvegungwa zvinowanzo kuve nzvimbo yekutarisisa. Pasi pemutemo wegungwa, zvimwe zviitiko zvinogona kutungamira kune zvakasiyana zvirevo. Izvi zviitiko zvakatsanangurwa mumutemo weUAE wegungwa.
Mitemo yegungwa inogona kuve yehunyanzvi. Ndosaka zvakakosha kuti ubate gweta regungwa kana uchiita tsaona pangara. Tsaona idzi dzinogona kunge dziri kubonderana kwemidziyo kana kukuvara pachako uri muchikepe.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo UAE maritime mutemo inoisa muganho wenguva pane akasiyana marudzi ezvekureva. Iyi ndiyo nguva yenguva yezvikumbiro zvakasiyana muUAE:
Chikumbiro chine chekukuvara pachako chinokonzerwa nekuregeredza nemuridzi wengarava chinofanira kuiswa mukati memakore matatu.
Iyo catheter pati inogona kuendesa chikumbiro kunopesana nemuridzi wechikepe kuti akanganise nhumbi yavo. Ivo vanofanirwa, zvakadaro, vanoita izvi mukati memazuva makumi mapfumbamwe.
Nekurovera kwemidziyo, munhu anofanirwa kuisa chikumbiro mukati memakore maviri.
Iyo muganho wenguva yeinishuwarenzi yemumvura makore maviri.
Makore maviri ezvibodzwa zvine chekuita nerufu kana Kukuvara Kwemunhu.
Mumwe munhu anofanirwa kuisa chikumbiro mukati memwedzi mitanhatu yekunonoka kuendeswa kwemitoro sezvakatsanangurwa muchibvumirano chechibvumirano pakati pemunhu nemuridzi wengarava.
Ruzhinji rwezvirevo izvi zvinoenderana nechibvumirano chechibvumirano pakati pemunhu nemuridzi wengarava. Izvi, kusvika padanho rakakura, zvichaona kana munhu wacho achigona kuisa chikumbiro kana kwete. Ichi ndicho chimwe chikonzero nei gweta regungwa rakakosha mune chero madhimoni maitiro.
Zvakajairika Zvikanganiso Vakakuvara Vafambisi Vemvura Vanogadzira
Kana uchiisa chikumbiro chekukuvara pachako kuchitsigirwa pamudziyo, pane zvimwe zvikanganiso zvakajairika.
# 1. Kuwedzeredza kudai
Vamwe vanhu vanokundikana kupa nhoroondo chaiyo yekuti tsaona dzakaitika sei. Dzimwe nguva vanowedzeredza zviitiko zvakakonzera kukuvara. Kuita izvi kunogona kukanganisa kukanganisa muripo.
# 2. Kunyanya kuzvivimba kuti mutongi kana juri richavapa zvese zvakafanira
Dzimwe nguva mutongi kana juri anogona kunge asiri kunyatsogutsikana neuchapupu hunopihwa nemunhu. Ndokusaka iwe uchifanira kuwana nyanzvi gweta regungwa kuti ikubatsire iwe kurwira izvo iwe zvakakodzerwa. Gweta revanoyemura vanokubatsira kutaura nyaya yako zvinogutsa.
# 3. Kuvimba nemunhu asiriye
Mazhinji vafambisi vengarava vanokuvara vanowanzovimba nevaridzi vengarava vanoenda kwavari kuti vasatsvage kuraira kwemutemo Muridzi wengarava anogona kunge akavimbisa kubhadhara imwe mari kune vafambisi vengarava vakakuvadzwa mwedzi wega wega.
Usati wagamuchira madhiri akadaro, zviri nani kutsvaga gweta. Izvi zvinodaro nekuti muridzi anogona kunge achironga huwandu hwakaderera pane hwakakodzera. Uye kana vasiri, ivo havana kusungwa zviri pamutemo kuchengeta vimbiso.
# 4. Kubata chikumbiro chavo vega
Munhu asina hunyanzvi hwepamutemo anodiwa anofanira kutsvaga rubatsiro rwemutemo. Kuisa chikumbiro pasina hunyanzvi hunodiwa uye ruzivo kunogona kutungamira mukukanganisa kwakasiyana siyana. Izvi zvinogona, zvakare, kukonzeresa kubvuma mukugamuchira muripo wakakodzera.
# 5. Kwete kuodha chikumbiro pazvinenge zvakakodzera
Kune akasiyana mafuremu enguva ekunyora zvirevo. Dare richarasa kunze chero chirevo chisina kuiswa mukati menguva yakatarwa. Saka nekudaro, zviri nani kubata gweta regungwa nekukurumidza mushure mechiitiko chiri kutaurwa.
# 6. Kutadza kutsvaga muripo
Kana munhu akabatanidzwa mutsaona yegungwa, zviri mukati mekodzero yavo yekutsvaga muripo. Saka munhu anofanirwa kukumbira muripo maererano nekusagadzikana kwese kwaakatarisana nako.
# 7. Kubvuma kubhadharwa pasi
Kana munhu akaisa chikumbiro, kambani yeinishuwarenzi ingangoda kuvashungurudza kuti vabvume zvavapihwa. Nekudaro, nekumiririrwa kwakakodzera zviri pamutemo, iyo kambani kambani inishuwarenzi zano rinokundikana. Gweta regungwa rinoisa mukuedza kukuru kuona kuti kambani yeinishuwarenzi inobhadhara zvakakwana munhu akabatwa.
# 8. Kukumbira zvakawandisa
Paunenge uchinyora chikumbiro, munhu anofanirwa kuona chaizvo. Ivo vanofanirwa kutsvaga muripo unoenderana nekukuvara kwakatsigirwa. Nguva zhinji, muripo unopihwa nekambani yeinishuwarenzi ndeyekuvhara mari yemunhu yekurapa. Gweta regungwa rinogona kukubatsira kuti uverenge kukuvara kwaunokodzera. Nenzira iyoyo, iwe unenge usiri kukumbira zvakawandisa kana kushoma.
# 9. Kusayina magwaro nekukurumidza
Mushure mekukuvadzwa pamudziyo, munhu anogona kugamuchira vashanyi kubva kukambani yeinishuwarenzi vachiedza kuita kuti vasaine chibvumirano. Munhu wacho anofanira kurega kusaina chero chibvumirano pasina zano repamutemo kubva kugweta ravo regungwa.
# 10. Kubvuma mhosva
Mushure mekukuvara, munhu anofanirwa kudzivirira kubvuma kune chero kukanganisa, kunyangwe pavanonzwa sekunge vanogona kunge vari ivo vari kukanganisa. Chinhu chakanakisa kuita kubata gweta regungwa uye kurondedzera chiitiko ichi kwavari.
Bata iyo Nyanzvi UAE Maritime Gweta
United Arab Emirates ndiyo imwe yenyika shoma muGCC ine yakazara uye yemazuva ano mutemo system iriko. Nekudaro, iyo UAE ichiri nekushomeka kwakati wandei mumutemo wayo wegungwa uye mune yayo yakazara maritime marongero echimiro.
Kana zvasvika pakushandisa gweta reUAE yegungwa, iwe unoda mumwe munhu anoziva nezve mukati uye kunze kwemutemo wegungwa. Mitemo yeMaritime inogona kuve yehunyanzvi sezvo paine akati wandei maitiro uye nhungamiro maererano nezve zviitiko zvegungwa. Izvi zviitiko zvinogona kusanganisira kuisa chikumbiro mugungwa, kusaina kondirakiti, kunyoresa ngarava, kuchaya ngarava nezvimwe
Amal Khamis Vamiriri vari kutungamira maAUE maritime law advocates. Isu tinopa kuraira kwepamutemo uye rubatsiro mumakakatanwa egungwa anomuka kubva kuzvibvumirano zvegungwa, kutakura zvinhu, uye chartering. Vatengi vedu vakavakirwa muUAE uye mhiri kweMiddle East. Tinogona kukubatsira kuti ukunde nyaya yako uye uwane muripo wakakodzera.
KuAmal Khamis Vanotsigira Mumiriri Wezvemitemo, isu tine magweta ane ruzivo rwakakura uye ruzivo mumitemo yegungwa. Isu tinoteerera zvakanyanya kune vatengi vedu uye tinoedza kushanda navo kuchengetedza kodzero dzavo uye zvavanofarira. Taura nesu nhasi kutsvaga rubatsiro rwemutemo maererano nenyaya dzegungwa.